ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: ဂေါတာမသည် မည်သူထံတွင် ဘုရားဆုတောင်းသနည်း??
ဂေါတမသည်ဘုရားရှိခိုးကြောင်းကို ပိဋကတ်တို့ကပြခြင်းကြောင်း ။ ။
ဂေါတမသည်၊ ဗောဓိညောင်ပင်အောက်သို့ရောက်ပြီးနောက် ၊ မြက်ခင်းနေရာမှာထ၍ ၊ မတ်တပ်ရပ်ရှိခိုးပြီးလျှင် ၊ မမှိတ်သောအနိမိဿစက္ခုဖြင့် ၊ ခုနှစ်ရက်ပါတ်လုံးဘုရားရှိခိုးကြောင်းကို ၊ ပါရာဇိကာဏ်အဌကထာကျမ်းတွင်တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြသည်မှာ ။ ။ ဗုဒ္ဓရူပံပဿန္တော သတ္တဒီဝသနီအက္ခီပူဇံနာမအကာသိ ။ ။အနက်ကား ၊ ဗုဒ္ဓရူပံ ၊ ဘုရားရှင်၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို ၊ ပဿန္တော ၊ ကြည့်ရှုလျှက် ၊ သတ္တဒီဝသနီ ၊ ခုနှစ်ရက်ပါတ်လုံး ၊ အက္ခီ ၊ မမှိတ်သောမျက်စိဖြင့် ၊ ပူဇံနာမ ၊ ပူဇော်ခြင်းအမှုကို ၊ အကာသိ ၊ ပြု၏ ။ ။ဤကဲ့သို့ပိဋကတ်ကျမ်းဂါန်တို့၌ ၊ ဂေါတမသည် ဘုရားရှိခိုးကြောင်းကို ပြပါလျှက်နှင့် အမှန်ကို မယုံကြည်လိုသော သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပိဋကတ်ကိုမစစ်ဆေးဘဲနှင့် ၊ လွှဲရှောင်၍ပြောကြသည်မှာ ၊ ဂေါတမသည်ဘုရားရှိခိုးသည်မဟုတ် ။ ညောင်ပင်နှင့်ပလ္လင်ကိုသာရှိခိုးသည်ဟူ၍ ငြင်းဆိုကြသည်များမှာ ၊ မစဉ်းစား ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည် ၊ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ၊ ၎င်းညောင်ပင်နှင့် မြက်ခင်းနေရာ ပလ္လင်သည် ၊ ဂေါတမ အတွက်အဘယ်အရာများ ကျေးဇူးပြု၍ ရှိခိုးစရာအကြောင်း ရှိပါသနည်း ။ ညောင်ပင်နှင့် မြက်ခင်းနေရာသည် ဂေါတာမထက်ပင် သာနေလို့လား ဤကဲ့သို့ဂေါတမ ဘုရားရှိခိုးကြောင်းကို ပိဋကတ်ကျမ်းတို့က ပြဆိုသောကြောင့် ။ ဂေါတမထက် ကြီးမြတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းကို သိစေဘို့ရန်စစ် ဆေး၍ ပြလိုက်သည် ၊ ထိုကဲ့သို့ပိဋကတ်က ဂေါတမသည် ၊ ဥာဏစက္ခုအားဖြင့် ၊ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုကြည့်ရှု၍ ၊ ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းကို သိ၍ ရှိခိုးကြောင်းကို ပြဆိုပါလျှက်နှင့် အဘယ့်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ရှင်ဂေါတာမထက် ကြီးမြတ်သော ဘုရားအား မကိုးကွယ်ကြဘဲ ဂေါတာမအား ကိုးကွယ်ကြသနည်း... ဂေါတမ ရှိခိုးသောကြောင့် သူတို့သည် ရှိမခိုးဘဲနေကြလေသလော ၊ ရှင်တော်ဂေါတမက ထိုဘုရားသခင်အား ရှိမခိုးခဲပါက သူတို့သည် ရှိခိုးကြပေလိမ့်မည်လော ။ (စဉ်းစားရစရာပင် ဖြစ်လာခဲ့သည်.) ရလဒ်အဖြေမှာ နအဖနဲ့ ငနာဂတုံးဘုန်းကြီးများပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဤဘာသာတရားအား အားပေးအားမြှောက်ပြုလျှက် မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ် အဟုတ်ကို ငြင်းပယ်၍ ဒီဘာသာတရားအား မခိုင်ခိုင်အောင် တည်ဆောက်နေကြတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.....
Posted by messenger at 5:21 PM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဂေါတာမဆုတောင်း နေသည်